कोरोना अपडेट: विश्वभर मृतकको संख्या १ लाख ५४ हजार नाघ्यो, हेर्नुहोस् कुन देशमा कति ? | Samabesi Khabar
कोरोना अपडेट: विश्वभर मृतकको संख्या १ लाख ५४ हजार नाघ्यो, हेर्नुहोस् कुन देशमा कति ?
विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस ‘कोभिड १९’ को कारण यो समाचार तयार पार्दासम्म विश्वभर १ लाख ५४ हजार ३सय३० जनाको मृत्यु भइसकेको छ । विश्वभर कोरोनाको संक्रमणबाट मृत्यु हुने मानिसको संख्या बढ्दै गइरहेको छ ।
वर्ल्डोमिटर्सको तथ्यांक अनुसार कोरोना संक्रमितको संख्या २२ लाख ५२ हजार ५ सय ९६ पुगेको छ । त्यस्तै विश्वभर कोरोना संक्रमित भएका ५ लाख ७४ हजार ८१८ जना निको भई घर फर्किसकेका छन् ।
विश्वभरका देशहरुमा कोरोनाको प्रभाव सबैभन्दा बढी अमेरिका, स्पेन, इटाली, फ्रान्स, जर्मनी लगायतका ठुला देशहरुमा परेको छ । यस्तै विश्वभरमै सबैभन्दा बढी प्रभाव परेको अमेरिकामा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३७ हजार १ सय ७५ पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या ७ लाख १० हजार २७२ जना पुगेको छ ।
त्यस्तै अर्को देश इटालीमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या २२ हजार ७ सय ४५ पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या १ लाख ७२ हजार ४ सय ३४ पुगेको छ । त्यस्तै स्पेनमा कोरोनाको संक्रमणबाट मुत्यु हुनेको संख्या २० हजार २ पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या १ लाख ९० हजार ८ सय ३९ पुगेको छ ।